Uhambo Olukhulu Lwesitimela lwaseYurophu Kwabaqalayo | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Uhambo Olukhulu Lwesitimela lwaseYurophu Kwabaqalayo
(Kugcine ukubuyekezwa On: 05/12/2020)
Noma ngubani lapha ovela ngaphandle kwaseYurophu? Phakamisa isandla sakho uma njengoba bekhungathekile ngenxa zokuthutha umphakathi njengoba nje nami ngingumlingisi. Impela, INew York inezitimela zangaphansi, futhi iToronto isebenza metro, kodwa ngobukhulu, umhlaba uyachuma ezimotweni. Ngakho noma nini lapho sizithola okwenza hop ngaphesheya ichibi okwesikhathi fancy Baguette French, izinto ungathola kancane esibekele. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi lokuqala izikhathi, abavame nakwazi ncamashi indlela yokuphatha uhambo lwabo Europe ngesitimela, ingasaphathwa lapho kufanele ukuhamba.
Ukuthi umehluko phakathi kwe-Eurostar ne Inethiwekhi ye-TGV Sitimela (Timvula a Gonqenqemeni Vthemes) noma ukuzama ukuzula ukubhuka kwesihlalo kanye namatheki athuthukile, kungaba zonke kube kakhulu kancane. Kulabo njengoba elahlekile njengoba nje nami ngingumlingisi, sike waqoqa uhambo engcono ukukunika Ultimate Europe Trip ngu zemininingwane Wabasaqalayo.
Isithuthi somzila Is The nokunobungane Way Izikhangibavakashi. This sihloko eyabhalwa sokuba umuntu afunde izindlela zemininingwane Hamba nge- Londoloza Isitimela, Amathikithi Eshibhile Eshibhile Iwebhusayithi Emhlabeni.
I-Europe Sitimela Sokuqalisa Abaqalayo 1: London
Kukhona izizathu eziningi thina okhethe London njengoba first stop kulolu hambo, kodwa jikelele nje eyenza umqondo kakhulu. Kusukela i-Nyakatfo Melika izindiza eLondon ziyinsakavukela futhi ezishibhile, okusho ukuthi uzogcina ukonga imali enkulu uma undizela eFrankfurt noma kwezinye izikhala zaseYurophu.
London iyisikhungo omkhulu futhi uzoba nenkinga ekutholeni izinto okumele uzenze. Uma ungumuntu fan of Harry Potter, edolobheni ugcwele ncwadi futhi movie izinkomba. Uma ngabe useshashalazini, UShoho usekhaya kakhulu kwezokuzijabulisa zeBroadway, futhi ungakwazi ngokuvamile ukuthola amathikithi at isaphulelo.
Ungakwazi kalula bachithe amasonto lapha ngaphandle kokuzama imisebenzi, kodwa okungenani, sincoma izinsuku ezine. Uma usukulungele udlulele, sekuyisikhathi ikhanda ukuya endaweni oya kuyo olandelayo.
Amsterdam amathikithi aseLondon
Amathikithi eParis ukuya eLondon
IBerlin eya amathikithi eLondon
Amabhulashi amathikithi aseLondon
Isitimela Sima 2: Paris
Awukwazi ukushaya i-Europe ngaphandle kokuchitha isikhathi ku- othandana kakhulu emhlabeni idolobha. UMkhandludolobha Lights uyisidingo stop, ngabe kungcono Ekuvakasheni kwakho kokuqala noma okweshumi yakho, futhi Ngenhlanhla zabahamba, le Eurostar isitimela siphela cishe njalo ngehora esuka eLondon aye Paris. Uhambo kuthatha phezu kancane 2 amahora kanye amathikithi wesitimela angabhukelwa ngemali ephansi ngaphambi kwesikhathi.
Sincoma kokuchitha izinsuku okungenani ezine lapha kanye, kepha uma isikhathi sakho sokuphumula kulinganiselwe ungayinqamula phansi ibe mibili.
I-Europe Sitimela Sokuqalisa Abaqalayo 3: Barcelona
Nakuba lokhu stop esilandelayo ngempela uhambo ngesitimela, ungakwazi ngokunenzuzo olele imoto ukuze uthole ukusnuza kwakho ngaphambi kokufika kuleli dolobha elisogwini. Thatha ithuba uzungeze iGothic Quarter futhi ujabulele i-churros ecwilisa ushokoledi ngaphambi kokuthi uqonde eParc Guell.
Enye yezingxenye ezinhle kakhulu zeBarcelona ukuthi iSpain ishibhile kakhulu uma iqhathaniswa nomakhelwane basenyakatho, ngakho-ke uzothola okuningi imali lapha. Sincoma ngokuhlala okungenani izinsuku ezimbili lapha ukuhlola idolobha.
Ima 4: Nice Ville
Famous for Boardwalk yayo futhi kakhulu eduze Cannes, I-Nice Ville iyakufanelekela ukumiswa ohambweni lwakho lwesitimela lwaseYurophu. Nakuba umuzi ngokwawo ngeke esikhulu njengoba inhlokodolobha eFrance, indawo yayo iseduze eziningana uyakufanelekela usuku uhambo. Okokuqala, ikhanda ukuze Monaco futhi ngokuhlala amadola amahlanu ngesikhathi yekhasino. Jabulela izimoto zikanokusho ulandele Formula 1 umzila phezu edumile emhlabeni race ithrekhi. Olandelayo, thatha isitimela esiya eCannes – uma ukhona phakathi nomkhosi unake out for osaziwayo enkulu!
Sincoma okungenani izinsuku ezine lapha zenzele indawo yonke leyo mikhambo yosuku.
I-Europe Sitimela Sokuqalisa Abaqalayo 5: Rome
Inhlokodolobha Italian kuyinto ukwanelisa amehlo. Kusukela Izinyathelo Spanish kuya waseTrevi, akukho ndawo lapho ungeke washaywa khona yi izakhiwo obumangalisayo. Uma lokho kwakunganele, ukudla kuwufanele slavering phezu. Ezenziwe Ngesandla pasta vies nge Gelato fresh kanye mozzarella inyathi ifikile ngokuqondile kusukela ipulazi.
Ngokweqiniso akukaze kube ngokweqile isikhathi sokuchitha eRoma, kodwa uma kumelwe nihambe ukwenza kube emva okungenani izinsuku ezinhlanu.
Ima 6: Venice
Ngingajabula remiss uma ngingazimemezelanga yisho Venice phakathi kohambo lwakho lokuqala. Nakuba angizange bathola okungcono (izivakashi eziningi kakhulu), lo muzi uyisidingo do. Phakathi kwe-gondolas nezikebhe zomphakathi, uzothola indlela yakho enqamula emiseleni kwamanye amasayithi athandana kakhulu eYurophu.
Sincoma ukuhlala okungenani izinsuku ezimbili eVenice ngaphambi kokwehla esitimeleni lapho uya khona olandelayo.
Milan eziya amathikithi eVenice
Amathikithi ePadua ukuya eVenice
I-Bologna kuya amathikithi eVenice
IRoma ukuya amathikithi eVenice
I-Europe Sitimela Sokuqalisa Abaqalayo 7: Vienna
Lapha siyakucela kokushiya umzila bahamba kakhulu futhi isihloko kancane endleleni. Okwawo ezinhle isizathu, Nokho, njengemiphumela liphakathi-elise amazwe aseYurophu akufanelanga ukunganakwa. Lezi kwabhalwa futhi ukuhlukanisa kwama-west nabanye umehluko yesiteleka. eVienna, lokhu kusho ukufutheka ikhofi isiko kanye namanani entengo yedwala. Yini enye engase ifunwe ufuna?
Sincoma okungenani izinsuku ezimbili e Vienna ngaphambi kokudlulela.
Amathikithi eSalokwana eVienna
I-Munich eya e-Vienna amathikithi
Amathikithi eGrey ukuya eVienna
Prague ukuya eVienna amathikithi
Ima 8: ePrague
Leli dolobha elineminyaka eyikhulu lidume ngedolobha lakhona elidala. Uma uvakashela, ungakhohlwa, wokuba ame ngesikhathi Wewashi Lomkhathi ngaphambi elibangise ukubona uJesu Infant. Uma anentshisekelo umlando, the Ghetto endala yamaJuda isabizwa izimpawu inhabitation bephoqeleka. Nakuba namuhla endaweni iye elilungisiwe kabanzi, usengakwazi uvakashele emasinagogeni yayo eziyisithupha.
Sincoma ukuhlala ePrague okungenani izinsuku ezintathu ukuhlola idolobha.
ENuremberg kumathikithi ePrague
I-Munich eya amathikithi ePrague
I-Berlin kuya amathikithi ePrague
IVienna kuya amathikithi ePrague
I-Europe Sitimela Sokuqalisa Abaqalayo 9: Berlin
A ibufakazi nokuzalwa kabusha, Berlin namuhla ihabhu hip isiko German. Ukuthi uzama ukuvakashela ibha ye-hipster noma i umnyuziyamu wobuciko wazifihla njengendlela yokudlela yokudlela emihle, Berlin kulapho ufuna ukuba. Kukhona izinto eziningi okufanele sizenze lapha, kufaka ekhatsi kuvakashela izinsalela uDonga LwaseBerlin. Kunjalo, zikhona zonke iminyuziyamu bendabuko nemipheme kanye.
Sincoma kuphele izinsuku ezintathu okungenani lapha ukuze bajabulele zonke Berlin kufanele sipho.
Amathikithi aseFrankfurt aya eBerlin
Amathikithi eLeipzig aya eBerlin
Hanover kuya Berlin amathikithi
IHamburg eya eBerglin amathikithi
Ima 10: Amsterdam
Ubone kwemiselekazi Venice, kodwa lutho kungaba bakulungiselele ukuba ukwazi ukuthwala Lihle, idolobha ngokuhleleka Amsterdam. Inhlokodolobha Dutch iyikhaya izikebhe emabhayisikili kunokuba izimoto, futhi ungakwazi kalula ukuchitha sonke isikhathi sakho lapha gawping ngesikhathi izakhiwo.
Sincoma ukuthi hamba uye e-Amsterdam okungenani izinsuku ezintathu lapha, Nokho uzowathola enze kangcono ne ezine noma ezinhlanu.
Kukhona unayo it. Kusukela London Amsterdam nayo yonke indawo emaphakathi, lena okahle kakhulu-European uhambo isitimela Wabasaqalayo. e-Amsterdam, ukhululekile ukubuyela eLondon ngokusebenzisa Londoloza Isitimela, noma ikhanda ekhaya kusuka khona Netherlands.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “Uhambo Olukhulu Lwesitimela lwaseYurophu Kwabaqalayo” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit nge isixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/europe-train-trip-beginners/?lang=zu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Ngo isixhumanisi esilandelayo, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- lokhu kuxhumana ukuze IsiZulu imizila amakhasi okufikela, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, futhi ungangena esikhundleni se-es to fr noma tr kanye nezilimi eziningi ozithandayo.
Daytrips IsitimelaJourny IzitimelaEEurope UkuPhuthelwa TripForBeginners UhamboInEurope
Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Qeqesha Ukuhamba EBelgium, Qeqesha Ukuhamba eDenmark, Qeqesha Ukuhamba Germany, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Holland, Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Izikhangibavakashi Europe